Myanmar Defence Weapons: Magwe Air Base
kong March 25, 2011 at 2:33 AM
ဒီတပ်မတော်ဟာ ဒီနိုင်ငံ၊ ဒီလူမျုိုးအတွက် ကိုးကွယ်လဲလျောင်း ဆည်းကပ်ရာဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးဘဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဒီတပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အော့နှလုံးနာစရာဖြစ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီတပ်မတော်ကို တည်ထောင်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အလကားဖြစ်မယ်။ ( ၃၀ - ၁ - ၁၉၄၄ )
kong March 26, 2011 at 10:25 AM
ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောပြပါ့မယ်ကြည်းတပ်ကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးradarတပ်တွေဟာတစ်နေကိုတစ်နာရီနှစ်နာရီဘဲoperateလုတ်နိုင်ပါတယ်စားဝတ်နေရေးအတွက်ဆီရောင်းရတာပေါ့ဗျာ၊ဒါကြောင့်၂၀၀၈တုန်းကbangladesh F-7တစ်စီးရန်ကုန်နားရောက်လာတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမသိလိုက်ပါလေတပ်radarမှမိပြီးMIG-29တက်လိုက်သွားသော်လည်းမမှီတော့ပါ။ထိုတပ်များကိုအပြစ်တင်လို့မရပါသူတို့လည်းစားဝတ်နေရေးအတွက်ပါ။ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ( ထိုအထဲတွင်uniformအရေကိုခြုံထားသောစားဝတ်နေရေးလောက်ငရုံမဟုတ်ဘဲချမ်းသာအောင်ကြံနေသော၊ဗိုလ်တုဗိုလ်ယောင်များမပါဝင်ပါ
မြန်မာပြည်သည် ဒို့ပြည် March 26, 2011 at 5:44 PM
အထက်က ကိုkong ပြောတာ စဉ်းစားစရာတွေရှိပါတယ်။ နအဖဟာ သူ့အဏာတည်မြဲရေးတစ်ခုကိုပဲ ကြည့်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အရေးကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ အစိုးရရုံးတွေဟာ ချေးကုံးစက္ကူလောက်တောင် မသန့်တဲ့ စက္ကူကို လျှောက်လွှာစာရွက်လို့ နာမည်တပ်ပြီး ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းစားကြပါတယ်။ မြန်မာတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့သူရော ပြည်ပထွက်တဲ့သူတွေပါ အခွန်ပေးရပါတယ်။ ရန်ပုံငွေ၊ အလှူခံ၊ ပြက္ခဒိန်ရောင်း စတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ နာမည်ပြောင်းပြီး အခွန်ကောက်တာလဲ ခံရပါတယ်။ လမ်းစည်းကမ်းကောင်းအောင် လုပ်တယ်ဆိုပြီး ဒဏ်ကြေးငွေတွေ မတန်တဆ ကောက်ခံတာလဲ ခံရပါတယ်။
ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူး။ ပြည်သူ့ ပိုက်ဆံနဲ့ လမ်းတွေ တံတားတွေ ဆောက်တော့လဲ အလကားသုံးခွင့်မပေးဘူးဗျ။ ဖြတ်သန်းခဆိုပြီး ကောက်ခံတယ်။ ဒီလောက် မတရားသဖြင့်လုပ်နေတော့ ကုန်ဈေးနှုံန်းတွေ ကြီးကုန်တောပါ့။ ရလဒ်က စစ်သားတွေလဲ ကုန်ဈေးနှုံန်းဒဏ်ကို ခံရပြီး ဓါတ်ဆီခိုးထုတ်ရောင်းစားတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ တကယ် စစ်တပ် စွမ်းရည် ထက်မြက်ချင်ရင် နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အချိုးပြင်ဖို့လိုမယ်။ ကျနော် အခုပြောတာဟာ စစ်တပ်ကို မုန်းလို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
kong March 26, 2011 at 8:17 PM
မြန်မာပြည်သည်ဒို့ပြည်ပြောတာထောက်ခံပါတယ်။နအဖဟာတပ်မတော်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးသူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝရေးဘဲအဓိကထားနေပါတယ်။တပ်မတော်ကိုအာဏာ၊အမိန့်၊ရာထူးအပြင်တချို့ကိုအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိူးသားရေးအရကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာနအဖကြောင့်တရုတ်ရဲ့လက်အောက်၊ထိန်းချုပ်မှူနဲ့လက်ဝေခံဘဝကိုရောက်သလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ( နိုင်ငံရေးမပါနိုင်ငံ့အရေးအမျိုးသားအရေးသာပြောတာဖြစ်ပါတယ် )
Kyaw March 26, 2011 at 11:08 PM
I will be very happy if we ordered for SU-30s/35s. Not sure about JH-7/FBC-1 as they got performance issues and as I mentioned before even Chinese themselves are not going to order more JH-7/FBC-1s and went for the Russian aircraft instead.
mg March 27, 2011 at 11:43 AM
အစကတည်းက သုံးစားမရတဲ့ F7 တွေအများကြီးဝယ်မယ့်အစား ခေတ်မှီတဲ့ အခုလို MIG29,SU-30,35s တွေကို ၀ယ်ရမှာပါ။အစိုးရသစ်တတ်လာရင်တော့ တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုကနေ ကင်းလွတ်ပြီဖြစ်လို့ အရာရာကို စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာကနေ ပြောင်းလဲလာမှာပါ။ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲလာမလည်းဆိုတာ မကြာခင်ပေါ်ပေါက်လာတော့မှာပါ။တပ်မတော်က တပ်မတော်တာဝန် ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကို အလုပ်လုပ် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့လွှတ်တော်တွေအစိုးရအဖွဲ့တွေကပဲ လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တာဝန်ကိုယ်စီခွဲလိုက်တဲ့အတွက် တပ်မတော်လည်း မိမိအလုပ်ကို ယခုထက်တိုင်ပိုမိုအာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်လာမှာပါ။
Tun Tun Ko August 3, 2012 at 8:57 PM
Kong တို့ မြန်မာပြည်သည်တို့ပြည်တို့ ဆွေးနွေးချက်ကလေးတွေ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ တို့ တပ်မတော်ရဲ့ Actual current position ဘဲ၊ စစ်သားစစ်စစ်တွေအတွက် သိပ်စိတ်ပျက်စ ရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ့။ တပ်ရင်းမှုး level လောက်ရောက်ရင် ရှေ့ အလားအလာ ကြီးပွားရေးအတွက်ဘဲ ရည်မှန်းချက်ရှိတာ့တာလေ။ ဘော်ဘော်တွေကိုမျက်နှာသာမပေးနဲ့ ဆိုတဲ့ ဘယ်တုန်းကထုတ်ပြန်လိုက်မှန်းမသိတဲ့ လွဲမှားတဲ့ သီအိုရီတွေနဲ့ တပ်ကိုကိုင်မယ်၊ ရာထူးတက်ရေးမှာ အမှတ်ရဘို့ အဘ က ကြိုးစားပြီး နောင်ရေးအာမခံချက်အတွက် ပိုက်ဆံရှာစုဘို့ မမ ကကြိုးစားလာ ကြပြီ ကဲ ဘယ်မလဲ တကယ့်တိုက်ခိုက်ရေး အင်အားစုတွေ ဖြစ်တဲ့ အခြားအဆင့်တွေအပါအ၀င် အရာရှိငယ်တွေ အတွက် သက်သာချောင်ချိရေး ဒီတော့ သူတို့ လဲ သူတို့နည်းသူတို့ ဟန်နဲ့ စီးပွားရှာကြရော တပ်မတော် လဲ ဘယ်လိုမှ အဖတ်ဆယ်မရအောင် နာမည်ပျက်ရော တပ်တွေ ရဲ့ တိုက်လိုခိုက်လိုစိတ်တွေ နေရာ မှာ စီးပွားရှာလိုစိတ်တွေ နဲ့ ဘဲ တင်းကြမ်းပြည့် နေတော့ ဒီတပ် ဘာကောင်းတာရှိတော့မှာလဲ။